गुगल एनालिटिक्स स्प्याममा Semalt विशेषज्ञको लिनुहोस् - यसलाई कसरी हटाउने
गुगल एनालिटिक्स स्प्याम र रेफरल स्प्याम अनलाइन प्लेटफर्महरूमा अपरेटिंग व्यवसायका लागि वास्तविक खतरा बनेको छ। स्पामर्सहरूले वेबसाइट मालिकहरूको फाइदा लिइरहेका छन् उनीहरूको वेबसाइटहरूमा गएर र मालवेयर साइटहरूमा यातायात ड्राइभ गरेर। डिजिटल मार्केटिंगमा बाँच्नको लागि, फर्महरू र संगठनहरूले आफ्ना वेबसाइट रिपोर्टहरूबाट सबै नक्कली आगन्तुकहरू सफा गर्नुपर्दछ। मालवेयर, ट्रोजन भाइरस, र गुगल एनालिटिक्स स्प्यामको साथ डिलिंग यो सामान्य रूपमा चित्रण गरिएको भन्दा अलि गाह्रो हुन्छ।
भूत रेफरल स्पाम, गैर-भूत रेफरल स्प्याम, र गुगल एनालिटिक्स स्प्यामबाट छुटकारा पाउन फिल्टरहरू सिर्जना गर्न र तपाईंको रिपोर्टबाट सबै खराब फाईलहरू र डाटा हटाएर सतर्क रहन समावेश गर्दछ। ग्राहकहरूलाई सजिलैसँग मालवेयर र स्पामबाट मुक्त हुन मद्दत गर्न धेरै उपकरणहरू राखिएका छन्।
इगोर Gamanenko देखि अग्रणी विशेषज्ञहरु को एक Semalt , तपाईंको रिपोर्ट देखि Google विश्लेषण स्पाम हटाउन कसरी मा दिशानिर्देश परिभाषित।
१. गुगल एनालाइटिक्सको बहु दृश्यहरू सेट अप गर्दै
कम्तिमा कम्तिमा तीन दृश्यहरू हुनको लागि दुई अतिरिक्त गुगल एनालाइटिक्स दृश्य सिर्जना गर्दै। नयाँ गुगल एनालिटिक्समा एउटा दृश्य समावेश हुन्छ, जुन प्राय: पूर्वनिर्धारितद्वारा सेट अप हुन्छ। तपाईंको डाटाको जगेडा योजनाको लागि वकालत गरिन्छ किनकि नयाँ परिवर्तनहरू लागू गरे पछि तपाईंको डाटा प्रभावित हुन्छ।
तपाईंको पूर्वनिर्धारित दृश्यलाई तपाईंको मुख्य दृश्य बनाउनुहोस्। गुगल एनालिटिक्स स्प्याम, ट्रोजन भाइरस, र मालवेयर खतराहरू फिल्टर आउट र हटाउनका लागि यस दृश्यमा सबै वेबसाइट डाटा पुन: नामाकरण गर्नुहोस्। अतिरिक्त सिर्जना गरिएको दृश्यहरूले परीक्षण दृश्य र एक कच्चा दृश्य समावेश गर्नुपर्दछ। कुनै फिल्टर वा परिवर्तन बिना तपाईंको कच्चा दृश्य सेट गर्नुहोस्, र तपाईंको वेबसाइटमा गरिएका परिवर्तनहरूको परीक्षण गर्न तपाईंको दृश्य तपाईंले डिफल्ट दृश्यमा भिन्नताहरू बनाउनु अघि।
२. मान्य होस्टनामहरू मार्फत स्पाम पत्ता लगाउनुहोस्
होस्टनामहरू मार्फत गुगल एनालिटिक्स स्प्याम पत्ता लगाउन धेरै सजिलो छ। होस्टनामले तपाइँको वेबसाइटको नाम प्रतिनिधित्व गर्दछ। नक्कली रिपोर्टहरू फिल्टर गर्न, तपाईंको रिपोर्टमा कानूनी होस्टनाम समावेश गर्नुहोस्। होस्टनामहरूको बाँकी स्वत: उपेक्षा हुन्छ। जहाँसम्म, यसले वास्तविक ट्राफिकलाई फिल्टर नगर्न सल्लाह दिइन्छ किनभने यसले तपाईंको वेबसाइट प्रगतिलाई नकरात्मक रूपमा असर गर्न सक्छ।
तपाईंको गुगल एनालिटिक्स दृश्यमा अर्को फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस् जुन होस्टनामहरूमा निर्दिष्ट गरिएको ट्राफिक समावेश गर्दछ। तपाईंको परीक्षण दृश्य कार्यान्वयन गरेर सुरू गर्नुहोस् र यसलाई पाँच दिन भन्दा बढिमा चल्नुहोस्। लेनदेनहरू जाँच गर्नुहोस् कि डाटा त्यस्तै रहन्छ किनकि तपाईं नक्कली ट्राफिक फिल्टर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको मुख्य दृश्यमा अर्को फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस् र फिल्टरमा सबै मान्य डोमेनहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्।
Gh. भूत रेफरल स्प्यामलाई फिल्टर गर्नुहोस्
तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स रिपोर्टमा प्रायः भूत रेफरल स्पाम र अन्य मालवेयर समावेश छन्। रेफरल स्पामले तपाइँको वेबसाइटमा नक्कली आगन्तुकहरू पठाउन काम गर्दछ। तपाईंको रिपोर्टहरूबाट रेफरल स्प्याम फिल्टर गर्न, दुई फिल्टरहरू सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको सूचीमा फेला परेका सबै भूत रेफरल थप्नुहोस्। यो कसरी कार्य गर्दछ भनेर जाँच गर्न सँधै तपाइँको परीक्षण दृश्यको साथ सुरू गर्नुहोस्, र त्यसपछि मुख्य फिल्टर लागू गर्नुहोस्।
B. बट्स बहिष्कार
गुगल एनालिटिक्सले टेकनीकमा काम गरिरहेको छ जुन सबै ज्ञात बोटहरू स्वचालित रूपमा तपाइँको रिपोर्टबाट बहिष्कार गर्दछ। बूटहरू फिल्टर गर्नका लागि परीक्षण दृश्य र मुख्य दृश्य सिर्जना गर्नुहोस्।
Spam. स्प्याम आउट फिल्टर गर्नको लागि खण्ड उत्पन्न गर्नुहोस्
मालवेयर र ट्रोजन भाइरस धेरै चिढचिढ्ने हुन सक्छन् जब उनीहरू तपाईंको वेबसाइटमा प्रवेश गर्छन्। नयाँ फिल्टरहरू उत्पन्न गर्नुहोस् जुन तपाईंको सक्रिय डाटाबाट सबै ज्ञात प्रेत रेफरल स्प्यामलाई हटाउनेछ। तपाईंको ईतिहास जाँच गर्न एउटा सेगमेंट सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको डाटाबाट सबै भूत रेफरल स्प्यामलाई हटाउनुहोस्।
रेफरल स्प्याम र गुगल एनालाइटिक्स स्प्याम वेबसाइट मालिकका लागि वास्तविक खतरा हो। रेफरल स्पाम वास्तविक वेबसाइटहरूमा नक्कली ट्राफिक उत्पन्न गर्दैछ केवल उनीहरूको खराब वेबसाइटहरूमा सगाई र वास्तविक ट्राफिक प्राप्त गर्नका लागि। ट्रोजन र मालवेयर जस्ता भाइरस स्प्यामरले वास्तविक ट्राफिक सिर्जना गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरीरहेको छ। तपाईंको रिपोर्टबाट रेफरल स्पाम र गुगल एनालाइटिक्स स्प्यामलाई हटाउन माथिल्लो हाइलाइट चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।